कसरी CBD infused ग्राउन्ड कफी मेरो जीवन राम्रो बनाउँछ?
CBD कफी समीक्षा
के CBD कफी हानिकारक हुन सक्छ? मारिजुआना को लोकप्रियता संसारभर मा धेरै छिटो बढ्दैछ, र त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन्, जो हरेक दिन कफी पिउँछन्। यसको मतलब यो हो कि यो समय हो जब क्याफिन र भांग दैनिक जीवनको लागि एक किसिमको पूरकको रूपमा एक साथ आउँदछन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा विशेष स्टोरहरू पहिले नै बिक्रीको लागि भ्याकाको साथ कफि उत्पादनहरू छन्। यो स्वादिष्ट लाग्दछ, तर धेरै व्यक्तिहरू यसलाई खरीदको विरोधाभास जम्मा गर्न डराउँछन्। सबै पछि, क्याफिन एक उत्तेजक हो, र गाँजा धेरै राम्रो एक शामक छ।
यस मुद्दामा हाल पर्याप्त डेटा छैन जब हामी CBD इन्फ्यूज ग्राउंड कफि पियौं के हुन्छ भनेर भन्नको लागि पर्याप्त छैन। जे होस्, अन्तरिम परिणामहरू र समीक्षाहरूको जोड र केही निष्कर्षहरू निकाल्न पहिले नै सम्भव छ।
CBD कफीका फाइदाहरू
जस्तो तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ यस विषयमा धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धान छैन। न्यू योर्कको जुकर हिल्स अस्पतालका मनोचिकित्सक विभागका सहायक डाक्टर स्कट क्र्याकोउरको विश्वास छ कि यी उपचारहरूले गर्दा समस्याले जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
डा। क्राकूउरले लाइभ साइन्ससँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि एकैसाथ प्रयोग भइरहेको बेला, भांग र क्याफिनले “न्युरोकेमिकली मिश्रण गर्न सक्दछ”, यसले शरीरमा छुट्टै सेवन गरेको भन्दा फरक प्रभाव पार्छ। धेरै मारिजुआना उपभोक्ताहरू विश्वास गर्दछन् कि क्याफिनले उनीहरूलाई पूर्ण आराम नगर्न सक्छ, तर यस धारणाको कुनै प्रमाण छैन।
दुबै उत्पादनहरूले एक अर्काको केहि गुणहरू गुणा गर्न सक्छन्, उपभोक्तालाई एकै समयमा समन्वय र निन्द्राको भावना दिन्छ। दुबै मुटुको दर बढाउनका लागि परिचित छन्, त्यसैले जब क्याफिन मारिजुआना, THC को साइकोएक्टिभ एलिमेन्टसँग मिसिन्छ, pranoia वा चिन्ताको भावना बढ्न सक्छ।
तर केही जिज्ञासु अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन कि क्याफिनले THC मा विपरित प्रभाव पार्दछ, सम्भाव्य रूपमा यसलाई अझ रमाइलो बनाउँदछ। 2011 मा, एक स्वतन्त्र अध्ययनको क्रममा, अनुसन्धानकर्ताहरूले गिलहरी र बाँदरहरूलाई THC र क्याफिनको समान खुराक दिए। उनीहरूले निष्कर्ष निकाले कि क्याफिनले साइकोएक्टिभ प्रभावलाई बढावा दिन्छ, त्यस्तै अवस्था प्राप्त गर्न कम THC आवश्यक छ। क्याफिन जस्ता उत्पादनहरूले THC को थ्रेसोल्ड खुराकको प्रभाव बढाउँछन्, जसले गर्दा एक सुदृढ प्रभाव हुन्छ।
धेरै व्यक्तिहरू क्याफिन र गाँजाको संयोजनको आनन्द लिन्छन्। यो किनभने ती दुबै दिमागमा डोपामाइन न्यूरन्सलाई उत्तेजित गर्छन्। डोपामाइन जारी गर्नाले क्याफिनको सहयोगले यसको प्रभाव बढाउनेछ र दुखाइ कम गर्दछ।
CBD कफी तथ्यहरू
मानिसहरूले लामो समयदेखि कफी र मारिजुआना मिलाउन कोशिस गरिरहेका छन: कफीले गति प्रदान गर्दछ, सीबीडीको प्रभावलाई सुदृढ पार्दछ र बढाउँदछ, यद्यपि यस ककटेलमा केही कमजोरीहरू छन्। केही स्थानहरूमा जहाँ गाँजालाई वैधानिक बनाइएको छ, त्यहाँ यसलाई रक्सीसँग मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसैले भट्टीलाई बारमा बेच्दैन। त्यसो भए, कफि पसलहरूले खुला व्यापार गर्न सुरु गरे, र हामी तिनीहरूको अनुभव हेर्न र यसलाई विश्लेषण गर्न सक्दछौं।
सीबीडी इन्फ्यूज गरिएको कफिले THC प्रभावलाई दुई पटक बढाउँछ
आदर्श रूपमा, कफि र भांगले एक अर्काको नकरात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्दछ र सकारात्मकहरू बढाउँदछ। यी प्रभावहरू एक अर्कामा सीबीडी कफी पोड एकैसाथ खान्ने व्यक्तिहरूमा बढी सामान्य हुन्छन् जसले यसलाई छुट्टै गर्छन;
कफीले एन्डोकानाबिनोइड रसायनलाई दमन गर्दछ, र चुरोट मार्जियानाले उनीहरूलाई उत्तेजित गर्दछ। त्यसो भए, संयुक्त प्रभावहरू सधैं स्पष्ट हुँदैनन्: सायद यो प्रत्येक व्यक्तिको लागि सही डोजमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, पहिलो अप्रिय अनुभवको मतलब यो होइन कि भांग र कफीको संयोजनले तपाईंलाई उपयुक्त छैन। हुनसक्छ, तपाईंले तिनीहरूको अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
दुबै क्याफिन र THC ले मुटुको दर बढाउँछन्। देशहरू, जहाँ भांगलाई वैधता दिइएको छ, उनीहरूले यी उत्पादनहरूको थप जाँचहरू गर्न रुचाउँदछन् र, संभवतः नयाँ लेबलिंग आवश्यकताहरू जारी गर्दछ जसले उपभोक्ताहरूलाई CBD सँगको कफीको अनुपातको बारेमा जानकारी दिन्छ (हामी ब्रान्डेड पेय पदार्थहरू र केफिन र THC दुबै समावेश गर्ने उत्पादनहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं) । तपाईंको नब्ज जाँच गर्नुहोस् र तपाईंको शरीर प्रतिक्रियाहरू बुझ्नको लागि सानो खुराकको साथ सुरू गर्नुहोस्।
के म मेरो कफीमा CBD तेल राख्न सक्छु?
क्याफिन र THC अलग खपतको प्रभाव बढी वा कम अध्ययन गरिएको छ (यद्यपि पूर्ण रूपमा होईन), तर तिनीहरूको संयुक्त प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन। मिक्समा क्याफिन थपेमा प्रयोगको लागि पूरै नयाँ चरण आउँदछ, जसले परिणाम अपेक्षित भन्दा कडा हो भन्ने तथ्यलाई निम्त्याउन सक्छ।
CBD कफी प्रभावहरु के हो?
यस्तो देखिन्छ कि यो सबै प्रत्येक पदार्थको व्यक्तिगत सहिष्णुतामा निर्भर गर्दछ, जब मारिजुआनासँग क्याफिन मिलाउँदा। कफी र भांगले हृदयको गतिलाई तिव्र बनाउन र कहिलेकाँही वा दुर्घटनामा खान्नेहरू बीच विकृति उत्पन्न गर्न सक्दछ, जबकि दैनिक कफी पिउनेले THC बाट अधिक ऊर्जावान र जोडदार प्रभावको आनन्द लिनेछ।
के CBD कफि कानूनी छ?
मारिजुआना विपरीत, क्याफिन रासायनिक लत हो, अझै विकसित देशहरूमा धेरै मानिसहरू यसलाई पिउँछन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको डेनभरमा भांग कानूनी छ र त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई कफिको साथ जोड्दछन्।
सामान्यतया, भांग र कफि एक आशाजनक संयोजन हो। सबै पछि, तिनीहरूलाई एक साथ उपभोग गर्नाले तपाईंलाई आराम र शक्तिको बृद्धि महसुस गर्न अनुमति दिन्छ।